China Adjustable Solid and Hollow Screw Jack Base for Scaffolding System ifektri kunye nababoneleli |Zhongming
Ukulungiswa okuSolid kunye neHollow Screw Jack Base kwiNkqubo ye-Scaffolding
Ukusetyenziswa kwesiseko se-jack: Isetyenziswe ngemibhobho yensimbi kunye ne-scaffolds kwinkqubo yokwakha ukulungelelanisa ukuphakama kwe-scaffolds kunye nesakhiwo sombhobho, ibhalansi yokuxhasa ubunzima, kunye nokuthwala umthwalo.Isetyenziswa kakhulu kwinkqubo yokwakha yokugalela ikhonkrithi yokwakha.Ngophuhliso olukhawulezayo lwe-real estate kunye nokuthuthwa kwe-three-dimensional kwiminyaka yamuva, ubuninzi benkxaso yephahla buye benza inkqubela ngokukhawuleza.
YethuIsiseko sikaJackIinkcukacha Imifanekiso
Ukuhlelwa kweejekhi zokwakha:
1. Ngokwenxalenye esetyenzisiweyo, inokwahlulwa ibe yinkxaso ephezulu kunye nenkxaso ephantsi
① Inkxaso ephezulu isetyenziswe kwisiphelo esiphezulu sombhobho wentsimbi, i-chassis ikwisiphelo esiphezulu, kwaye i-chassis ine-hemming;
②Inkxaso engezantsi isetyenziswe ekupheleni kombhobho wensimbi ekwakhiweni kweprojekthi yokwakha, i-chassis iphantsi, kwaye i-chassis ayikwazi ukugotywa;
2. Ngokwezinto ze-screw, zinokwahlulwa zibe ziintlobo ezimbini: i-hollow jack kunye ne-jack eqinile.I-screw ye-lead yejekhi egobileyo yenziwe ngombhobho wentsimbi otyebileyo, okhaphukhaphu;ijekhi eqinileyo yenziwe ngentsimbi engqukuva, enzima ngakumbi.
3. Ngokubhekiselele ekubeni inamavili okanye ayinayo, inokwahlulwa ibe: inkxaso ephezulu eqhelekileyo kunye nenkxaso yevili lomlenze.Iijekhi ezinamavili ngokuqhelekileyo zifakwe i-galvanized kwaye zisetyenziselwa inxalenye engezantsi ye-scaffold ehambayo ukuququzelela ukukhuthazwa kwenkqubo yokwakha;iijacks eziqhelekileyo zisetyenziselwa ukwakhiwa kwezakhiwo zobunjineli ukuxhasa uzinzo.
4. Ngokwenkqubo yokuvelisa i-screw, i-jack eqinile inokwahlulwa ibe yi-screw-rolled screw kunye ne-cold-rolled screw.I-screw-rolled screw inenkangeleko entle kunye neendleko eziphezulu kancinci;isikrufu esiqengqelekayo esibandayo sinenkangeleko entle kancinci kwaye sinexabiso eliphantsi kancinci.
Ukucwangciswa kwesikrufu sokwakha, inkqubo yokuvelisa abavelisi kwiindawo ezahlukeneyo ziyafana, uqwalaselo lwahlukile, kwaye uqwalaselo lunokwahlulwa kwimiba emihlanu:
1) I-Chassis: Ubukhulu kunye nobukhulu be-chassis bahluke kwimimandla eyahlukeneyo kunye nabavelisi.
2) Ukuqinisa iimbambo: Nokuba kukho iimbambo zokuqinisa kwindawo yokudibanisa ye-screw rod kunye ne-chassis, ngokubanzi ngokweemfuno zeprojekthi, izixhaso ezide eziphezulu ze-screw zixhotyiswe ngokuthe ngqo ngeembambo zokuqinisa, kunye nezantsi ezimfutshane zixhasa. abafane baxhotyiswe.
3) Ubude be-screw ngokubanzi ukusuka kwi-40 ukuya kwi-70, kwaye ubukhulu be-screw ngokuqhelekileyo φ28, φ30, φ32, φ34, φ38mm.
4) Kukho iinkqubo ezimbini zokuvelisa ukulungelelanisa amantongomane axhotyiswe ngenkxaso: i-iron castings kunye ne-stamping forming parts.Amantongomane Uhlobo ngalunye lokulungisa i-nut inobukhulu obulula okanye obunzima.Kukho iindidi ezimbini zeemilo zeendongomane: indongomane yesitya kunye nesikrufu samaphiko
Oomatshini bethu bokusebenzela:
Isikhongozeli Silayisha Imifanekiso
Ngaphambili: Ulwakhiwo oluNgangenwa ngamanzi eFilimu oluJongene neSakhiwo esiReusableable Formwork Plywood
Okulandelayo: I-Adustable Galvanized Shoring U Head kunye nentloko yefolokhwe kwi-scaffolding
ikomityi izincedisi indebe ephezulu ikomityi esezantsi umndi...
Ukubamba umsebenzi owenziweyo
Umsebenzi onzima/Umsebenzi olula olungelelanisiweyo wentsimbi yeProp...
Imathiriyeli emitsha ehambelana nokusingqongileyo...
Amacandelo e-Scaffolding eRinglock, Plastic Formwork For Column, Ikhonkco le-Ringlock scaffolding Bracket, Kwikstage Scaffolding Accessories, I-Scaffolding Adjustable Screw Jack, Izahlulo zesikafula esinemisonto yeBase Jack,